Xuska maalinta Kofeega Adduunka, horta Bunkan laga daba dhacay xaguu asal ahaan ka soo jeedaa? – Hagaag.com
4 Luulyo 2020 in English // American patriotism falls to lowest point in two decades, poll finds…
4 Luulyo 2020 in English // Putin mocks U.S. embassy for flying rainbow flag…
4 Luulyo 2020 in National // Mareykanka oo si kulul uga hadlay xadgudubyada ka dhanka ah saxaafada xorta ah ee Somaliland…
4 Luulyo 2020 in National // M/weyne Farmaajo ayaa ku qaabilay Madaxtooyada Qaranka Danjiraha Shiinaha ee Somalia…
4 Luulyo 2020 in Sports // Aabaha dhalay feeryahanka caanka ah ee Ruushka Habib Noor Muhammadov ayaa geeriyooday…
Xuska maalinta Kofeega Adduunka, horta Bunkan laga daba dhacay xaguu asal ahaan ka soo jeedaa?
Posted on 30 Seteembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Sanad kasta oo ku beegan 29ka bisha Septembar waxaa adduunka laga xusaa Maalinta Kofeega Adduunka, waana munaasabad lagu xuso cabbitaankan, kaasoo ah mid adduunka oo dhan caan ka ah.
Laakiin waa maxay asalka cabitaankani?
Lama oga asalka mirahan run ahaantii laakin nin dhalinyaro ah oo la oran jiray Kaldi oo ari ku daajin jiray dhulka sare ee Itoobiya ayaa wuxuu ogaaday in mirahan markay Idaha ama Ariga cunaan ay dareemaan firfircooni xataa iyagoo ku dhowaada inay niikiyaan, daraasad kadib wuxuu ogaaday in riyuhu cuneen miro gaduudan, kadib wuxuu goostay inuu asaga naftiisa isku dayo si uu ula qeybsado niikiska Riyaha.
Kaldi ayaa markaa aadey adeerkiis oo ahaa wadaad diinta Christian-ka kaasi oo degganaa meel u dhow, wuxuu ku dhowaaday inuu duulo farxad darteed helista mirahan cusub.
Mesfin Tekle oo ka mid ah dadka deggan tuulada oo ka soo wariyey sheekada awoowayaahiisa ayaa sheegay “wadaadkii diinta markii miraha loo keenay wuxuu ku riday dabka iyagoo ka baqayay jinniyo shar leh”.
Laakiin markii urta kafeega la dubay ay sanka ka gashay wadaadkii diinta, waxay dareemeen dareen la mid ah kii Kaldi, waxay ka noqdeen ra’yigooda kadib markay qiyaaseen in tamartan cusub ay xamaasad ku keeni doonto cibaado diimeedka.
Qaxwaha Itoobiya wuxuu leeyahay dhaqan gaar ah. Bunka ayaa lagu shubaa saxan dheri ah oo fidsan si ay qoraxda u qalajiso, kadibna waa la dhaqaa waxaa lagu dubaa weel bir ka sameysan iyadoo lagu karinayo qoryo ama dhuxul, dherigii oo kulul ayaa lagu wareejinayaa martida si ay ugu raaxeystaan urta bunka, kadib waa la tumayaa, waxaa lagu shubayaa abriiq ama kirliga ay bunka u isticmaalaan reer Itoobiya.
Kulamo badan oo dadka Itoobiyaanka ku qaxweeyaan ayaa waxaa la shidaa foox loogu talagalay martida si ay ugu raaxeystaan labada caraf oo is dhex gashay, Dad badan oo Itoobiyaan ah ayaa sidoo kale ku sameysta magaalooyinka iyagoo dhulka ku faraasha caws, si loo xusuusto noloshii tuulooyinka. Caadooyinka isticmaalka bunka ama qahwaha ayaa qaata waqti badan iyadoo martida ay ka sheekeystaan waxyaabaha maalin walba dhaca.
About Admin (10568 Articles)
American patriotism falls to lowest point in two decades, poll finds…
Putin mocks U.S. embassy for flying rainbow flag…
Sex workers lack food for taking HIV drugs during COVID-19…
Aabaha dhalay feeryahanka caanka ah ee Ruushka Habib Noor Muhammadov ayaa geeriyooday…
ManCity oo guul darro qaraar dhadhansiisay Liverpool kadib markii 4-0 ku garaacday…
Sawir dhaqaajiyey quluubta dadka oo abuuray murugo iyo uur ku taalo ayaa qabsaday baraha…